Iiholide kwi-Danish cosiness
I-Country Camp Falkenburg ikwindawo yokuzonwabisa yasekhaya. Indawo efana nepaki i-traffic-yazoliswa kwaye inika umtsalane okhethekileyo kwixesha ngalinye lonyaka.
Idolophu encinci yaseHohenwestedt imalunga ne-1 km ukusuka apho. Le ndawo ibonelela ngezinto zokuthenga ezilungileyo kakhulu, oogqirha, iphuli eshushu yangaphandle, iiholo ezininzi zemidlalo kunye neziko lentenetya.
I-Aukrug Nature Park ikummandla okufutshane kwaye inika ezinye iindlela zokuhamba ngeenyawo kunye neebhayisekile.
Indlu imi kwisiza esimalunga nama-400 square metres kubuhlanti kunye nezinye izindlu ezi-6.
Ithafa ijonge kude nobuhlanti kwaye yogqunywe zizityalo zecherry emhlophe yelaurel. Indlu inendawo yokupaka yabucala ngqo endlwini.
Ebusika ungonwabela ubumnandi, iiyure eziphumlileyo ngaseziko.
Ngokuphakama kwesilingi malunga ne-3m, amagumbi abonakala ebanzi kwaye eqaqambile.
Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle kunye neziqholo ezininzi kunye nesixa esikhulu sesitya kunye ne-cutlery.
Kukho indawo enkulu yokudlala yabantwana ngaphakathi kwendawo yokuchithela iholide. Kukwakho nesikolo sokukhwela iponi kwalapha kwamasango.
Itafile yokutya yabantu aba-4, i-sofa, i-TV yesathelayithi, inkqubo yomculo, i-DVD player, i-Playstation enemidlalo kunye ne-smart TV. I-WiFi kunye neeselfowuni ze-LTE ziyafumaneka. Malunga neeDVD ezingama-60 kunye neziko elihle.
Indlu inamagumbi amabini okulala. Enye enebhedi enebhedi ezimbini ezinobukhulu obungama-90x200 cm kunye nenye ibhedi enomlinganiselo we-140x200 cm. Iibhedi zineomatrasi ezibandayo. Kukho iiduvethi kunye nemiqamelo. Amakhava ebhedi ukuya kutsho kubantu aba-4 ayafumaneka.
Ikhitshi lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya, umenzi wekofu, iketile, imicrowave kunye nesitovu (i-4-ring hob enehotplates) ene-oveni. Ifriji kunye nesikhenkcisi esahlukileyo ziyafumaneka. Uzakuba sele uzifumene izitya. I-grill yamalahle nayo ibonelelwe.
Igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese. Umatshini wokuhlamba uyafumaneka.
Iindleko ezongezelelweyo (umbane, amanzi, igesi) zibandakanyiwe kwixabiso lokubhukisha.
Iinkuni zihlawuliswa ngokwahlukeneyo (i-EUR 20 ngekiriva). Ikiriva inika iinkuni iingokuhlwa ezi-4 emlilweni ovulekileyo. Ukuba kufuneka ngaphezulu, nceda u-odole kwangaphambili.
Jonga phambili ukuhlala kamnandi.
Yonke iholide yeholide i-traffic-izolile kwaye ngoko i-idyllic kakhulu kwaye izolile, kunye nemithi ye-oki endala kunye ne-beech. Indlela ejikelezayo ikhokelela kumadlelo, amahlathi kunye ne-lake landscape, nayo eyepaki. Kukho ukukhwela iponi yabantwana ngaphakathi epakini. Indawo yokudlala enkulu kakhulu inokufikelelwa ngeenyawo ngaphantsi kwemizuzu eli-10. Kubadlali begalufa, ibala legalufa laseAukrug linokufikelelwa ngemizuzu eli-15 ngemoto. Aliqela amachibi amakhulu okuloba akhoyo. Ungakwazi kwakhona ukuloba echibini epakini kunye nethegi yokuloba. IFalkenburger Rundweg yindlela entle yokunyuka intaba kunye nokubaleka phakathi kwamadlelo, amahlathi, amachibi kunye nemilambo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hohenwestedt